Soosaarayaasha Soosaarayaasha - Shirkadaha Shiinaha Soo Saaraya & Warshadaha Shiinaha
Dharka toosan ee Dharka Dheeraadka ah ee Difaaca Sare ee Polyester Dharka Dhoolatiga ah ee Shirt CM197C4100T2
Nooca CHECKEDOUT Shayga Cuntada CM197C4100T2 Cabbirka S-3XL Erayada furaha ah yunifoomka dharka, yunifoom soo-dhoweyn, shaati gacmo dheere, jaakad waardiye 65/35 poly / suuf GSM 180g tolida siligga polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoogga sare. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta dusha ...
Dharka dharka ee 'Polyester Class Class Short Sleeve Slim Fit' oo dharka lebiska xidhan Dharka CW197D4100T2
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CW197D4100T2 Cabbirka S-3XL Erayada furaha dharka, dharka isboortiga, shaati gacmo dhaadheer, shaati gacmo-gashi Farshaxanka 65/35 poly / suuf GSM 180g tolida siligga polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoogga-sareeya. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa corrosion-resi ...
Cudurka Cudurka Dhegaanta ee Cilmiga Poliska ee Class Class Long Long Sleeve Lebis Shirt CU1115C125000T6
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CU1115C125000T6 Cabbirka S-3XL ereyada furaha dharka, dharka isboortiga, shaati gacmo dhaadheer leh 100% suuf Xinjiang Aksu dhaadheer oo dhaadheer ah, aan wax ku shubin, wax ciriiri ah, lahayn cudurka kansarka, nolosha adeega ayaa 2 jeer ah cunista joogtada ah jaakad. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, soo afjarid wanaagsan ...
Dharka dharka toosan ee Dharka Dheeraadka ah ee Polyester Dharka toosan ee Dharka Dharka ah ee Caanka ah CW197C4100T2
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CW197C4100T2 Cabbirka S-3XL Erayada furaha dharka, dharka isboortiga, shaatiga gacmo dhaadheer, shaati gacmeedka Mashiinka dharka 65/35 poly / suuf GSM 180g Dharka tolida pollenster-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoogga-sareeya. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciriiriga hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabbinta kuleylka, polyester yarn waa corrosion-resis ...
GRAY Polyester cudbiyeed Classic Short Sleeve Slim Fit sugida dharka labiska ee Shibis CM185D5901H
Nooca CHECKEDOUT Shayga Cuntada CM185D5901H Cabbirka S-3XL Erayada furaha dharka sugida, dharka isboortiga, shaati gacmo gaagaal ah Dhar 65/35 poly / suuf Xinjiang Aksu dheer oo suuf ah, aan wax cabbin, bir-jabin, kansar, nolosha adeega waa 2 jeer sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, tirtirid wanaagsan ...
Dharka dharka toosan ee Gawaarida Dhoolatiga ah ee Polyester Gaari ah Dharka Dharka ee1919DD100T2
Nooca CHECKEDOUT Shayga Cuntada CM197D4100T2 Cabbirka S-3XL ereyada furaha ah yunifoomka dharka, yunifoomka martigelinta, shaati gacmeedka gaagaaban, dharka waardiyaha Farshaxanka 65/35 poly / suuf GSM 180g Dharka tolida Xarka polyester ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta adag. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa corrosion-resistan ...
Dharka dharka cad ee dharka lagu qurxiyo ee dharka lagu jeexjeexo ee CAD181D0400E
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CW181D0400E Cabbirka S-3XL Erayada furaha dharka, dharka isboortiga, shaati gacmo gaagaal ah Dhar 65/35 poly / suuf GSM.146g Xinjiang Aksu suuf dhaadheer oo dhaadheer, aan wax cabbin, wax ruxaya, lahayn kansar, nolosha adeega 2 jeer waa jaakad qafiif ah oo caadi ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, Abra wanaagsan ...